musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nepal Kuputsa Nhau » Chishamiso cheNyika Yekushanyirwa Zuva muNepal iri kuvhurwa?
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Trending Now • Wtn
Namaste World Tourism Zuva 2021! ZveNepal izvi zvinogona kureva kuti mahotera angakurumidza kugamuchira vaenzi vekunze zvakare. Nepal inozokwanisa kuratidzira nzvimbo dzayo dzakavhurika, nyanza, makomo uye chikafu kune vashanyi vanotsvaga rusununguko rwekupararira kuti vanakidzwe neakanakisa nzvimbo inoonekwa nenyika ino.
Vakuru vane ruzivo vatungamiriri muNepal vanotarisira kuvhurwa kwenyika yeHimalaya yekushanya.
Zuva reWorld Tourism Day muNepal haringori chete, asi uchave mutambo wepanyika munyika inotarisirwa kuridza mabhero ekuvhurazve vashanyi.
Nemwedzi yekuvhara, Nepal yakagadzirira kugamuchira vashanyi nemaoko maviri.
Panogona kuve nechikonzero nei Hurumende yeNepal yakafunga kupemberera iri kuuya World Tourism Day muNepal panyama.
Kana paine chero nyika pasirese iyo kuregera nharaunda haisi dambudziko, ingangove Nepal. Hurumende yeNepal yakanga yachengeta nyika yakavharwa kwemwedzi yakawanda kudzivirira kupararira kweCoronavirus. Pakutanga kwedenda reNepal rakaonekwa semuenzaniso kune nyika kuti ungachengetedza sei vashanyi.
Vatungamiriri venzvimbo yekushanya vaive vagadzirira kuitazve. Mumusangano mavhiki maviri apfuura, aimbova CEO weNepal Tourism Board, Deepak Raj Joshi akatsunga kukumbira hurumende kuti ibvise zvido zvevagari voga kuitira kuti vakurudzire kushanya muNepal.
Achinongedzera kuti vekunze vashandi vekushanyirwa vabaiwa jekiseni chinzvimbo cheboka kuti chikamu chekushanya chinofanirwa kuziviswa chakavhurwa neHurumende yeNepal.
World Tourism Network Sachigaro Juergen Steinmetz aive mutauri pachiitiko chazvino nevatungamiriri veNepal Tourism zvakare vachikurukura nhanho inotevera mukuvhurazve kufamba uye kushanya munzvimbo yeHimalaya muNepal, Bhutan, India, neTibet.
Deepak Raj Joshi ari kutungamira iyo Himalaya Inofarira Group yeWorld Tourism Network.
Vhiki mbiri dzakapfuura boka iri raikurudzira kumutsiridzwa kwemavisa pakusvika nekusimudzirwa kwekuyedzwa kwePCR kunhandare yendege.
Nepo zvikamu zveNepal zvichangobva opened pasi pemamwe marambidzo, Akadai mabhaisikopo dzimba uye maresitorendi pa 50% vanokwanisa, asi pane ave hapana gadziriso kumatongerwo ekufambisa eNepal mumwedzi mitanhatu.
Zuva rekushanyirwa repasi rose 2021, richapembererwa mumuviri muNepal.
Gurukota reNepal rezveTsika, Tourism, uye Aviation rakazivisa kuti musi waGunyana 27th kuchaitwa mhemberero huru nemasiki nekufamba munharaunda.
Dingindira rezuva reWorld Tourism Day gore rino ndere ”Tourism for Inclusive Growth. ”
Zvinotarisirwa kuti dingindira rinobatsira kukurudzira kunzwisiswa kukuru kweUN Sustainable Development Goals. Chirongwa chepamutemo chiri kurongwa muhoro yeNepal Tourism Board.
Vhidhiyo naScott MacLennan, eTN Nepal
Iko hakuna kugadziridzwa kwepamutemo parizvino nezve chinzvimbo chekushanyirazve kuvhurwa muNepal, asi masosi akasimbiswa ne eTurboNews tarisira kuti chiziviso ichi chichauya munguva pfupi iri kutevera.
Kusvika kuNepal kwevashanyi vakazara vachena kunotarisirwa kubvumidzwa kune vagari vanobva munyika zhinji. Kuiswa wega kwevaenzi vakadaro hakuchazodiwa.
Scott MacLennan, eTurboNews muNepal akati: Iyi inzira huru yekupemberera Zuva reWorld Tourism Zuva.
Mamwe mashoko nezveNepal Tourism anogona kuwanikwa pawww.welcomenepal.com